နောက်ခံဗွီဒီယိုများ၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၊ ဇယားများ၊ 3D ဇယားများ၊ 3D ဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုသတင်းအချက်အလက်ပုံစံများ၊ အသံဖမ်းခြင်းများ၊ ဗွီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သင်၏နောက်ဗီဒီယိုအတွက်အပြည့်အဝဗီဒီယိုတင်းပလိတ်များကိုပင်အွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်၏ဗွီဒီယိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သင်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်ထိုအစုများသည်သင်၏ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ သင်၏ဗီဒီယိုများကိုအချိန်ကာလအနည်းငယ်အတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်များပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာနည်းပညာအရပါးနပ်လိမ္မာပါးနပ်ပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကာတွန်းအချို့တွင်ဗီဒီယိုကိုမည်သို့တည်းဖြတ်မည်၊ အစားထိုးခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စာသားပြောင်းခြင်းစသည်တို့ကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်လာသည်။
ဒီနေရာမှာဥပမာကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒီထွက်စစ်ဆေးပါ Videohive မှ Whiteboard Pack - သင့်ကိုယ်ပိုင်ရှင်းလင်းဗီဒီယိုကိုအတူတကွစုစည်းရန်ကြိုတင်တီထွင်ထားသောအမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကွက်များအားလုံးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သို့မဟုတ်သင် iPhone အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ After Effects တွင်ကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ချင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာဝယ်ကြလော့ BlueFX မှ iPhone Catalog သငျသညျသှား!
အင်တာနက်ပေါ်ရှိစတော့အိတ်ရိုက်ကူးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက် ၅၀ ကျော်ကိုရှာဖွေရန်သင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၂ ခုရှိသည်။ ထွက်ခွာသည် Footage.net.
သင်၏နောက်စီမံကိန်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သောစတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုကိုရှာဖွေရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များများစွာကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါအကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်ငါအများဆုံးအသုံးပြုသော site ကိုဖြစ်ပါတယ် Depositphotos။ အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေမှုနယ်ပယ်တွင်ဗွီဒီယိုနှင့်ရှာဖွေပါကရလဒ်များသည်ဗီဒီယိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်၊ သင်သည်သူတို့၏ရှာဖွေမှုစာရင်းမှဗွီဒီယိုကိုရွေးနိုင်သည်။
123RF - HD သိုလှောင်ထားသည့်ဗီဒီယိုနှင့်ဗွီဒီယိုများ
Adobe ကစတော့အိတ် - သင်၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းများဖြင့်အသက်ဝင်စေပါ။
အသက်အရွယ် Fotostock - မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲထားသောအခွင့်အရေးဗီဒီယိုကလစ်များ။
Alamy - ၅၅ သန်းကျော်သောအရည်အသွေးမြင့်စတော့ရှယ်ယာပုံများ၊
Clipcanvas.com - တစ်ကြိမ်တည်းလိုင်စင်ကြေး၊ အမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမည်သည့်မီဒီယာ၊ မဆိုပုံစံ၊
Corbis လှုပ်ရှားမှု - အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖန်တီးမှုနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်အကြောင်းအရာများအဆက်မပြတ် update လုပ်သည်
Depositphotos - တစ် ဦး ကစပွန်ဆာ Martech Zone!
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ရည် - ဗွီဒီယိုသက်ရောက်မှုနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကူးခြင်း။
ပျြောစေ - ဒီနေ့မြင်ကွင်းပုံပြောသူအတွက် HD ဗီဒီယို
iStockphoto - စတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုကိုရှာပါ
MotionElements များ - အာရှ - မှုတ်သွင်းခံစတော့ရှယ်ယာရိုက်ကူးမှုနှင့်ကာတွန်း
ရုပ်ရှင် - လုံးဝအခမဲ့ကာတွန်းရုပ် 2D နှင့် 3D နောက်ခံကာတွန်းများ၊ သုံးပုံအောက်နှင့်အခြားအရာများ
plixs - CC0 လိုင်စင်ဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကို CCXNUMX လိုင်စင်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Pond5 - စတော့ရှယ်ယာမီဒီယာစျေးကွက်
ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်း။ - အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောစီမံကိန်းများပြီးနောက်၊ တေးဂီတနှင့်အသံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြီးနောက်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းချိုသာသောဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း
Shutterstock - မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သောစတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုများ
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း - မူပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲခွင့်လိုင်စင်များပါသောအရည်အသွေးမြင့်စတော့ရှယ်ယာဗွီဒီယိုဖိုင်။ Ultra HD ရိုက်ကူးချက်များကို 1080p ဖြင့်ရယူနိုင်သည်။
ကဗျာ - မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သောစတော့များကိုရိုက်ကူးခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုနောက်ခံ၊ After Effects တင်းပလိတ်များနှင့်အခြားအရာများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် subscription-based အရင်းအမြစ်။
ဗီဒီယို - မူပိုင်အခမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များ
Vimeo - Vimeo အယ်ဒီတာများမှရွေးချယ်ထားသောခြွင်းချက်၊ မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သည့်စတော့ရှယ်ယာဗီဒီယို။
YayImage ဗီဒီယိုများ - စျေးနှုန်းချိုသာသော HD ၂၅၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် 250,000K ဗွီဒီယိုဖိုင်များ။
အကယ်၍ သင်ဟာဂန္တ ၀ င်ရုပ်ရှင်အချို့ကိုလိုချင်လျှင်၊ အင်တာနက်ရုပ်ရှင်မော်ကွန်းတိုက်!
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ post မှာတွဲဖက်ချိတ်ဆက်လင့်ခ်တွေရှိတယ်။
Tags: 123RFAdobeAdobe စတော့ရှယ်ယာဆိုးကျိုးများအပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတင်းပလိတ်ပြီးနောက်အသက်အရွယ် Fotostockသဘာဝမည်သည့်ပုံစံမီဒီယာတစ်ခုခုခ - လိပ်ဘီဘီစီရုပ်ရှင်ပြခန်းအပြာရောင်ကလစ်Corbis လှုပ်ရှားမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ရည်ပျြောစေဗီဒီယိုဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရှာဖွေရေးFramepoolအခမဲ့စတော့ရှယ်ယာရိုက်ကူးရေတံခွန်iMovieအင်တာနက်ရုပ်ရှင်မော်ကွန်းတိုက်ချစ်သူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများလှုပ်ရှားမှုနောက်ခံလှုပ်ရှားမှုဒြပ်စင်ရုပ်ရှင်ဒေါင်းလုပ်အများအပြားတစ်ကြိမ်လိုင်စင်ကြေးထာဝရအသုံးပြုခြင်းPond5ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်း။အခွင့်အရေးမူပိုင်ခွင့်အခမဲ့Shutterstockစတော့ရှယ်ယာကာတွန်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းစတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးဇာတ်လမ်းတိုအကူးအပြောင်းဗီဒီယိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဗီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများဗီဒီယိုဖိုင်ဗီဒီယိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုဗီဒီယိုvimeo စတော့ရှယ်ယာအိမ်ဖြူတော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း
ဇန်နဝါရီလ9ရက် 2014 ခုနှစ် ညနေ 12 နာရီ 02 မိနစ်
ဖော်ပြခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ Douglas! အများကြီးတန်ဖိုးထား။
သြဂုတ်လ 18 ရက် 2014 ခုနှစ် 11:20 နာရီ
ဤပြည့်စုံကောင်းမွန်သော စတော့ခ်မီဒီယာစျေးကွက်များစာရင်းအတွက် MotionElements အပါအဝင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရှာဖွေရန် သေချာစွာသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အဆင်ပြေသော VisualSearch အသစ်ကို စမ်းကြည့်ပါ။